Bolivia: Fivorian’ny Bloguivianos · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2017 3:59 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 简体中文, عربي, 繁體中文, English
Nivory tao Santa Cruz ho an'ny fivorian'ny “Bloguivianos. [ES]” voalohany fanao isan-taona tamin'ny 1 Septambra ny bilaogera Boliviana avy any ivelany sy manerana ny firenena . Hanome ny fahafahana ho an'ny maro izay mifandray fotsiny amin'ny alalan'ny bilaogy na mailaka mba hihaonana mivantana ity fivoriana ity , ary handraisan'ny bilaogera tafiditra manokana ao anatin'ireo sehatra ireo anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra isankarazany.
Nokarakarain'ny Mundo Al Revés [ES] sy CEPAD [ES], , ary ahitana ihany koa ireo komitin'ny bilaogera Vania Balderrama [ES] , Jessica Olivares [ES] , José Andres Sanchez [ES] , Renzo Colanzi [ES] , Pablo Carbone [ES], Sebastian Molina [ES], ary María Escándalo [ES].
Ahitana ny fizarana mikasika ny Bilaogy sy ny Literatiora, Bilaogy sy ny Politika, Bilaogy sy ny Fanaovan-gazety, ny Bilaogy sy ny Tambajotra ny fandaharam-potoana amin'io andro io [ES]. Io fotoana io ihany koa dia manasongadina ny famelabelarana fohy ataon'i Miguel Esquirol [ES] mikasika ny endriky ny tontolon'ny bilaogy Boliviana izay solontenan'ny tranonkalan'ny vondrom-piarahamonina Blogs Bolivia [ES] , ary avy amin'i Hugo Miranda sy Mario Duran momba ny tetikasa Voces Bolivianas any El Alto .
Mampiaina mivantana ny famahanana blaogy momba ny hetsika ihany koa i Miranda ary ho hita ao amin'ny tranonkala Bloguivianos mandritra ny tontolo andro ny fanavaozam-baovao .
Nanolotra famatsiam-bola ho an'ny dia miisa roa [ES] ho an'ny blaogera avy any El Alto, Willmar Pimentel [ES] sy Cristina Quisbert [ES] ny tetikasa Voces Bolivianas tohanan'ny Rising Voices mba hanatanterahana ny fandraisana anjara manerana ny firenena.